Umyili weNkqubo oZenzekelayo
Uyenza njani inkqubo F yocingo lwemoto
Ngoku uthotho lweBMW F luneenkqubo ezimbini: Inkqubo yeCAS4 kunye neFEM / BDC. Iindlela ezimbini ze-CAS4 zokulwa nobusela. Inkqubo yokuqhekeza umdwelisi eyamkelwe yi-CAS4 kwiminyaka yokuqala isetyenzisiwe kwaye isathandwa ziinkosi ezininzi. Umdwelisi weenkqubo uqhekeza i-chip ngokusebenzisa isantya esiphakathi ...
Isikhokelo kwitekhnoloji yesitshixo semoto
Njengesiqhelo, zonke iimoto ngoku zisebenzisa indlela efanayo yokuqala-ukuvula umbane ngeswitshi sombane ukuqala i-injini kunye ne-injini. Nangona kunjalo, indlela yokulawula iswitshi yahlukile ngokuxhomekeke kwimodeli yemoto. Uninzi lwabo basebenzisa indlela yesiqhelo yokufaka isitshixo, whi ...
Indlela yokujongana nokusilela kwesitshixo semoto
Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, oloqwalaselo lwabantu luye lwasinceda ukuba sigcine inkathazo enkulu, enokuthi ibonakale kwikona ekude emotweni. Izitshixo zokuqala zemoto zifana nezitshixo zendlu yethu. Ucango lwemoto kufuneka luvulwe ngokufaka isitshixo soomatshini kumngxunya wesitshixo ....
lisebenza njani isitshixo semoto？
Inqaku lokuqala: ukusebenza komgaqo-nkqubo wesitshixo semoto Phakathi kwezixhobo ze-elektroniki ezithandwayo emotweni, inkqubo ephambili yesitshixo itsala amehlo. Itekhnoloji yokungena engenanto izisa ubuchule obuhle, kwaye ukuqala kwesitshixo esinye kuzisa ukuqonda okupheleleyo kwetekhnoloji, kodwa kubiza ngaphezulu ekuguqukeni ...
Indlela yokulungisa Imitha yeTiguan ibonisa "isitshixo asifunyanwanga"
Imoto ibimise egaraji kutheni ingakwazi ukuqala ngengomso? Nangona kunjalo, ngeli xesha ideshibhodi ayibonisi "inkqubo yokulwa nobusela eyenziwe yasebenza", kodwa "isitshixo asifunyanwanga", isitshixo esikude siqhelekile, kodwa asiyifumani imoto! Yintoni ingxaki? Emva kokuhlolwa ngenyameko, ...
Indlela yokususa u-Anti-ubusela kwinguqulelo yesi-4, uguqulelo olu-5 lweTiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
IVolkswagen kunye ne-Audi yesi-4 neyesi-5 yokurhoxiswa kokulwa nobusela zibandakanya iimodeli ezininzi, kubandakanya iVolkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L, ezinye A6L, njalo njalo. Banokucima ubusela, njengokusetyenziswa kweBosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X serie ...
Unokwenza njani ukuba umnyango utshixiwe emotweni?
Imigangatho yokuphila yabantu iyaphucuka, ke ubomi beRhythm buyakhawulezisa. Kule meko, abanye abantu baya kuba ngokungakhathali, kwaye bahlala bezishiya izipaji zabo okanye izinto ekhaya xa bephuma, ayinamsebenzi ukuba uzilibele ezi zinto zincinci, kodwa ukuba utshixa isitshixo semoto ...
Ungasifumana phi isitshixo semoto esitshintshayo replacement
Unokwenza njani xa ulahlekelwa sisitshixo semoto? Abanini bemoto banengxaki yile ngxaki. Xa kuziswa imoto entsha, bekukho izitshixo ezibini. Ulahlekile enye isenaso isitshixo sokugcina, kodwa uza kwenza ntoni ukuba isitshixo sokugcina siphulukene naso? Ke kuya kufuneka utshatise amaqhosha. Namhlanje ndiza kukuxelela indlela yokutshatisa kude ...
Ukuvela kweebhili zebhanki esembindini: uphononongo lwembali yomhlaba kunye neempawu zokubuyela kunxweme | IBhanki yabantu yase China_Sina Ezezimali_Sina.com
Iqela leembovane lilapha! Okthobha 29! Vula iakhawunti ngoku kwaye ulungele ukuthengwa! [Ngena emotweni ngoko nangoko ukuze ube ngumnini zabelo kwaye wonwabele izibonelelo zokuvula iakhawunti! Ibhili yebhanki esembindini yibhondi yexesha elifutshane ekhutshwe yiBhanki yaBantu yase China, ebhaliswe ziibhanki zorhwebo ngu ...
Uyenza njani ukuba ilahleko yesitshixo semoto?
ngomphathi ku 20-08-17
Qhagamshela isikhululo soqhakamshelwano Qwalasela isitshixo esitsha Ukuba ukhetha ukuxhobisa isikhululo sokulungisa ngesitshixo esitsha, kuya kufuneka unikeze isithuthi kunye ne-ID yomnini. Ngokweemodeli ezahlukeneyo, isikhululo sokulungisa sidinga ukuba umnini asinike isitshixo sokumisela isitshixo esineenombolo ezili-17. T ...
Vula nje ucango lwekhabhathi Uninzi lweemoto luvula kuphela ucango lwekhabhathi xa ucofa iqhosha elikude, kwaye emva kokulicofa kabini, zonke iingcango zinokuvulwa. Abanye abaqhubi bathabatha imoto kwindawo yokupaka ekude, Ukuba uvula nje umnyango wecab, banokuthintela abantu ababi ukuba bangene emotweni ...
Ndikunike uncedo olungcono
ngomphathi ku 20-07-15
Inkqubo yoku-odola Bhalisa iakhawunti nge-imeyile yakho - Ngena - Yongeza into ngobuninzi kwinqwelo - Ngenisa (jonga) -Khetha umthengisi Inkonzo yethu 1.Sibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zezitshixo zemoto, iitshipsi zomthuthi, abadwelisi beenkqubo eziphambili, izixhobo zentsimbi njl. 2.Nawuphi na umbuzo uza kuphendulwa ...